Ihe omuma: Tinye ihe omuma nke ndi mmadu na saiti obula! | Martech Zone
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ saịtị ọ bụla na weebụ na-eji mmekọrịta mmadụ na ibe ya Akara ngosi iji gosipụta njikọ ha na Twitter, Facebook, LinkedIn na adreesị mmekọrịta ndị ọzọ na webụ. Ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ na-enye ohere iji tinye mkpụrụedemede, na-enye ohere ndị a na-akparaghị ókè na nhazi nke ọnụnọ weebụ gị.
Anyị na-arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa mara mma nke e mere site KA + A, a nnọọ ihe ịga nke ọma branding na imewe ike. Anyị esonyela n'ọtụtụ ndị ahịa… ha wepụta akara ngosi na imepụta wee mezie ya, bulie ya ma jikọta ya maka ndị ahịa anyị. Ọ dị mma kemgbe ndị na-emepụta ha ọ bụghị naanị na-ewu saịtị mara mma, ha na-edekwa koodu mara mma.
Onye ahịa anyị gwara anyị ka anyị tinye ihe oyiyi LinkedIn ma jikọta ya na ala aka nri nke saịtị ha. Mgbe anyị leruru anya na ya, anyị chọpụtara na ọ bụghị ihe oyiyi ma ọlị. Ọ bụ font na-egosipụta Twitter na Facebook! Ime ụfọdụ hacking ngwa ngwa, anyị nwere ike ịhụ na ha etinyela akara ngosi mmekọrịta ọha na eze site na Symbolset.
Ihe akara bụ akara asụsụ akara asụsụ. Ha na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ na ebe ọ bụla atụmatụ OpenType na-akwado.
Nke a bụ incredibly oru oma! Akara ederede nwere ike gbanwee, nwee agba ọ bụla, ma nwee ụdị styl ndị ọzọ etinyere site na CSS, dịka ọmụmaatụ. Akara edemede na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa. Site na nkwalite mmepe, anyị enweghị ka onye nrụpụta anyị wepụta akara ngosi ọhụụ ọhụụ nke nwere otu agba, ogo na ụdị nke ndị ọzọ. Naanị anyị ga-eji koodu HTML maka akara ngosi LinkedIn, kechie ya na njigide arịlịka, anyị wee pụọ!
Social Symbolset bụ naanị $ 3 wee bịa na akara ngosi mmekọrịta ugbu a:
Kudos ka KA + A maka ụdị mmemme ahụ dị jụụ. Ekwenyesiri m ike na anyị ga-ahụ ọtụtụ ohere ndị ọzọ iji tinye akara ngosi Symbolset na saịtị anyị. Ikpeazụ ederede, na ọ bụghị naanị na ha nwere Social Oyiyi, ha nwere ọtụtụ usoro nke ọzọ Akara ókwú… er… akara.
Tags: akara ngosi facebookgoogle tinyere akara ngosinjikọ iconinakara ngosi mmekọrịtaakara ngosi twitter
Ahịa Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi